I-DA inqumele umholi ugwayi katiki | News24
I-DA inqumele umholi ugwayi katiki
Cape Town - UPatricia de Lille usebekelwe kuze kushaye uMsombuluko ukuba achaze ukuthi kungani kungamele esule esikhundleni sokuba yimeya.
Amahlebezi aqale ukusabalala ngoLwesine kanti ukuqinisekise yena kwiCape Argus ukuthi uthole incwadi ephuma esigungwini esiphezulu seDA simcela ukuba ehle esikhundleni noma abeke izizathu zokuthi kungani kumele agcinwe kulesi sikhundla.
Okhulumela uDe Lille, uZara Nicholson, utshele iphephandaba ukuthi: “Imeya iyibonile imibiko nokushiwoyo. Naye uyitholile incwadi ephuma eqenjini. Okwamanje usaxoxisana nabameli bakhe. Uma esekhulumile nabo, uzokhuluma ngalolu daba emphakathini.”
OLUNYE UDABA: Umnyango usavuliwe kumalungu ashiya i-ANC - Mbete
UPhumzile Van Damme oyilungu le-DA ePhalamende uthe esitatimendeni, lesi sinqumo i-DA isithathe ngemuva kokuthola ukuthi kunezinselelo ezinkulu kwikhokhasi ye-DA eKapa, ezinomthelela ongemuhle emizameni yokusebenzela abantu bakuleli dolobha ngendlela efanele.
I-DA ithe iphinde yammisa emisebenzini yonke yalo.
Umthombo ongaphakathi kwi-DA kubikwa ukuthi udalule ukuthi incwadi efana nale iphinde yathunyelelwa nosotshwebhu we-DA emkhandlwini, uShaun August, nakuSomlomo uDirk Smit.
Bebuzwa laba ngamahlebezi, abafunanga ukuphawula noma ukucacisa.